.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Adobe Photoshop CS3 [ Portable ]
Adobe Photoshop CS3 [ Portable ]
Adobe Photoshop CS3 [ Portable ] လေးပါ။ Flash Song တွေ လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့
သီချင်းလေးထဲမှာ ကိုယ့်ချစ်သူပုံလေးတွေ ထည့်ချင်တာတို့ တစ်ခြား ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ၊နောက်ပြီးတော့
ကိုယ်လုပ်တဲ့ သီချင်းနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ပုံလေးတွေ ထည့်ပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင် လှလှပပလေး ဖြစ်အောင် ပြင်ချင်တာတို့
မလိုချင်တဲ့ဟာတွေ ဖြတ်ထုတ်ချင်တာတို့ အဲလိုလေးတွေ လုပ်ချင်မယ် ဆိုရင်တော့ Photoshop ဆော့ဝဲလ်နဲ့ပဲ
လုပ်ကြရတာပါ။ ဒီကောင်လေးက Porable လေးလည်း ဖြစ်တော့ Install လုပ်စရာမလိုသလို serial number တွေ
Keygen ထည့်ရတာ စတာတွေ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒေါင်းပြီး ဒါရိုက် ဖွင့်သုံးလိုက်ရုံပါပဲ။
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ။အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ....
Download: Adobe Photoshop CS3 [ Portable ]
ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါရန်......။
Posted by Thurainlin at 09:45
lwanthumyotaw3March 2013 at 07:45
အကိုရေ ညီကူးသွားတယ် နော်
ညီဆိုဒ်မှာ အကိုဆိုဒ်လင့်ချိပ်ချင်ပါတယ် အကို